Cloudwords: Global Marketing hiteraka fangatahana sy hitomboan'ny fitomboana | Martech Zone
Mba hahafahan'ny orinasa miteraka fitakiana ary mitombo manerantany, mila miteny fiteny 12 izy ireo mba hifandraisana amin'ny 80% amin'ireo mpihaino kendreny. Koa satria mihoatra ny 50% ny vola miditra ho an'ny orinasa amerikanina dia avy amin'ny mpanjifa manerantany, ny indostria #localization $ 39 + lavitrisa sy ny indostrian'ny #translasiôna dia tafiditra ao anatin'ny fitarihana ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny tsena manerantany. Na izany aza, ny orinasa mila mandika haingana ny fitaovam-pivarotany sy manitatra iraisam-pirenena dia miatrika fanamby lehibe: ny fizotran'ny toerana misy azy ireo dia amin'ny tanana, mandany fotoana, tsy mahomby ary sarotra refy.
Ny banga amin'ny atiny manerantany
Ireo mpivarotra dia mamorona votoatin'ny varotra sy varotra be dia be amin'ny rafitra marketing automatique, marketing ary atiny Web CMS ampiasain'izy ireo hanaterana traikefa manokana sy fampielezan-kevitra ho an'ny mpihaino. Mba hahatratra ny mpihaino amin'ny fiteny maro manerantany, izany atiny rehetra izany mila omena toerana ho an'ny tsena isam-paritra. Na izany aza, ireo mpanome tolotra fandikanteny dia tsy mampiasa ireo rafitra ireo, izay miteraka fizotry ny fametrahana toerana tsy mahomby. Mba hahatratrarana ny fandaharam-potoana any amin'ny tsena, ny mpivarotra dia tsy maintsy manao fifanakalozana fandikan-teny: Noho ny famerana ny fotoana sy ny teti-bola dia tsy afaka mamadika fananana sasany ho an'ny tsena sasany izy ireo, ary mamela ny vola miditra eo ambony latabatra.
Cloudwords mamaha ny elanelana amin'ny atiny manerantany.
Cloudwords dia varotra manerantany. Amin'ny maha Hub Global Go-to-Market azy, Cloudwords dia mandeha ho azy ny fivezivezena eo an-toerana ho an'ny atiny rehetra manerana ny orinasa hanampiana ireo orinasa handefa fampielezan-kevitra amin'ny fiteny maro 3-4 heny haingana ary farafaharatsiny 30% amin'ny vidiny. Richard Harpham, CEO an'ny Cloudwords
Orinasa teknolojia marina natsangana hatramin'ny farany, Cloudwords no sehatra automatique fandikan-teny voalohany miorina amin'ny rahona noforonina mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa. Cloudwords dia manome fampidirana tsy mitongilana ho an'ny automatisation marketing mitarika 20 mahery, fitantanana atiny, ary rafitra Web CMS. Anisan'izany i Marketo, Adobe, Oracle, HubSpot, WordPress ary Drupal, manafaingana ny varotra manerantany amin'ny maridrefy, ny fampitomboana ny ROI amin'ny ezaky ny orinasa manerantany, ary ny fampitomboana ny karama sy ny fidiram-bola.
Analytics sy tatitra momba ny fotoana tena izy: Araho ny fandaniam-bola, diniho ny fahombiazan'ny dingana ary fandrefesana ny kalitao sy ny ROI amin'ny sehatra manerantany sy isam-paritany amin'ny fotoana tena izy.
Fitantanana fampielezan-kevitra manerantany: Miaraha mikasa sy manatanteraka fampielezan-kevitra manerantany, isam-paritra ary eo an-toerana amin'ny paikady stratejika sy haingana kokoa amin'ireo sampana, orinasam-pandraharahana ary jeografia. Mamorona tetik'asa fandikan-teny ary araho ny fandrosoana amin'ny dashboard mahery. Mampivondrona ekipa miparitaka amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasa ary mahazoa fanairana sy fampandrenesana mandeha ho azy.
Cloudwords OneReview: Ny lohatenin'ny indostria fiaraha-miasa eo amin'ny fiaraha-miasa sy ny fanovana fanovana, ny fahaizan'ny teknolojia mandroso ao amin'ny OneReview no mahatonga azy io ho fomba mora indrindra hijerena sy hanovana ny atiny voadika.
Cloudwords OneTM: Mitahiry teny sy fehezan-teny efa voadika ao anaty tahirin-kevitra iray an'ny tobim-pahalalana Memory Memory izay noraisina an-toerana ary mitazona izany hatrany ao anaty tahiry. Mahazo miditra amin'ny OneTM an'ny orinasanao ny mpandika teninao, mitsitsy fotoana sy vola amin'ny vidin'ny fandikan-teny, ary mitazona hatrany ny fandefasan-kafatra marika amin'ny tsena maro sy fiteny maro.
Tantaran'ny fahombiazan'ny mpanjifa Cloudwords
Cloudwords dia mpiara-miasa tsy miankina amin'ny fizotran'ny localization for Fortune 500 sy Global 2000 orinasa manerantany, ao anatin'izany ny CA Technologies, Palo Alto Networks, Hach, McDonald's, Siemens, Marketo, Iron Mountain, Fitbit, Patagonia, ary Blackboard.
Cloudwords dia mamaha ny filàna lehibe ho an'ny mpanjifa manao marketing amin'ny sehatra manerantany. Richard Harpham, CEO an'ny Cloudwords
Cloudwords Mametraka Marketo amin'ny fifehezana ireo tranokala manerantany
Ny sehatra automatisation marketing Marketo dia ohatra tsara amin'ny mpanjifa Cloudwords mandefa tranokala misy toerana ho an'ny mpihaino manerantany any amin'ny faritra kendrena. Ny ekipan'ny Marketo dia nahavita nanafaingana ny fotoana nanovana ny atiny voafantina ka nohavaozina tamin'ny fotoana iray na tao anatin'ny andro vitsivitsy taorian'ny tranokalan'i Etazonia ny tranokalan'izy ireo, mifanohitra amin'ny herinandro na volana maromaro taty aoriana. Vakio ny fandalinana tranga feno.
Ny tambajotra Palo Alto dia mahatratra haingana kokoa ireo mpihaino manerantany miaraka amin'ny rahona rahona
Ny orinasan-tseraseran'ny tambajotra sy orinasa Palo Alto Networks dia tsy nandika votoaty saika ilaina mba hitazomana ny filan'izy ireo isam-paritra satria nanana fizotran'ny toerana misy azy ireo izy izay be asa, mandany vola ary mandany fotoana be. Cloudwords dia mamela ny ekipa hitantana mora ny tetik'asa localization, ary ny interface automatique eo anelanelan'ny Adobe Experience Manager sy Cloudwords dia manafaingana ny fotoana fandikana ny fandikan-teny, ahafahan'izy ireo mamorona sy manolotra fanentanana voarindra kokoa, matetika kokoa, handroahana ny fangatahana sy ny vola miditra manerantany. Vakio ny raharaha fenoina.
Ny foiben-toerany any San Francisco, Cloudwords dia tohanan'ny Storm Ventures sy ireo mpitan-javatra amin'ny rahona toa an'i Marc Benioff, mpanorina ny salesforce.com. Email Discover@cloudwords.com Na fitsidihana www.iranarco.com raha mila fanazavana fanampiny, ary midira amin'ny resaka manerantany ao amin'ny Twitter @CloudwordsInc ary tamin'ny Facebook.
Tags: AdobesolaitrabeCA Technologiesrahona rahonadrupaleloquaprectargetSehatra fizarana rakitraFitbitmaneran-elanelana amin'ny atiny manerantanyGlobal Marketingfampielezana varotra manerantanyhasihubspotIron MountainLocalisationmarketony McDonaldOraclePalo Alto NetworksPatagoniaSiemenssitecorefandikan-tenyWordPress